China China Umenzi wexabiso Iinjini ezizenzekelayo zokucoca ulwelo zeToyota Lexus Nissan Honda Isuzu Mitsubishi Subaru Hyundai Kia Chevrolet mveliso kunye nabenzi | Chuangqi
China Umenzi weXabiso leNjini oZenzekelayo wokucoca ngeOyile yeToyota Lexus Nissan Honda Isuzu Mitsubishi Subaru Hyundai Kia Chevrolet
Ifilitha yokuhamba okuphezulu eyenzelwe ukuphucula ukusebenza
Yenzelwe i-oyile yokwenziwa kunye neyesiqhelo
Imithombo yeendaba yokuhluza yeNkulumbuso yokunyusa amandla
Inika ukuhluza okungabalulekanga
Umba China Umenzi weXabiso leNjini oZenzekelayo wokucoca ngeOyile yeToyota Lexus Nissan Honda Isuzu Mitsubishi Subaru Hyundai Kia Chevrolet
Ukuthunyelwa ukubonisa, umoya, ulwandle
Izinto eziphathekayo Iplastikhi, iPhepha, isinyithi
Isampulu Ii-1-2 ii-pcs ziyafikeleleka (isampulu yasimahla, intlawulo yekhuriya yokuhlawula umthengi)
Izinto eziluncedo Umgangatho we-1.Excellent, oQhelekileyo osebenza unyaka omnye okanye isiqinisekiso se-30,000km.
Ukunikezelwa 2.Fast, iintsuku 15-30.
3.Produce yeefilitha zeoyile, amacebo okucoca amafutha, amacebo okucoca umoya, njl iimoto kunye neelori.
Ixabiso 4.Reasonable kunye nomgangatho ophezulu.
I-OIL FILTER -Umgangatho ophezulu, isiXhobo sokuBuyiselwa kweZixhobo zoqobo, iFit ngokuthe ngqoGcina imoto yakho isebenza kakuhle nale Filter yeoyile. Iqukethe i-valves back-drain back ekuncedeni ukukhusela ukuqala komile. Esi sihluzo seoyile sicetyiswa yiFord Motor Inkampani ukulungiselela iinjini zedizili.
Iifilitha zeoyile yeConqi ziyilelwe ukuhlangabezana okanye ukugqitha kwiimfuno ze-OEM, kwaye kuvavanywa ngokungqongqo ukusebenza kakuhle, amandla, kunye namandla agqabhukileyo. Ulwakhiwo oluhlala luhleli, imithombo yeendaba yeefilitha ezihamba phezulu, kunye neMinyaka emi-1 yokuQinisekiswa kweMida yenza ukuba iicrafti zeConqi zikhethe umgangatho ophezulu kubaqhubi abanomdla wokusebenza.
Ukusebenza kweefilitha zeConqi zesilivere zeoyile zenzelwe ngokukodwa ukufakela abaqeqeshi kunye nabanikezeli beenkonzo. Uyilo lwabo lokuhamba okuphezulu lunokunceda ukuphucula ukusebenza kweinjini ngokunciphisa isithintelo sokucoca ioyile. Iifilitha zethu zeSilivere yeoyile yokuSebenza zinobume bebhotile egudileyo ukuze zisuswe ngesitshixo seoyile yemveli esiqhele ukufumaneka kubafaki bezorhwebo. Ezi zihluzo zeNtsebenzo yeoyile yesilivere zibonelela ngokuhluza okubalaseleyo kunye nokukhuselwa kweinjini kubo bonke ubomi babo benkonzo. Zenzelwe ukujongana nawo onke amabakala ezinto zokwenziwa, eziqhelekileyo nezihlanganisiweyo zeoyile yeemoto. Imithombo yeendaba ecociweyo ibonelela ngesakhono esiphezulu sokwenza ukuba balungele ukongezwa kotshintsho lweoyile xa isetyenziswa ngokungqinelana nesindululo kunye nemveliso yeoyile yeemoto. Ukusebenza kweefilitha ze-Conqi zesilivere zeoyile ziyafumaneka kwi-canister kunye ne-cartridge yohlobo lweefayile zokucoca ulwelo.
1. Nayiphi na imibuzo iya kuphendulwa kwisithuba seeyure ezingama-24, sichongelwe ioyile / umoya / i-cabini / izihluzo zepetroli ngaphezulu kweminyaka eli-12.
2. Umniki wobungcali wecebo lokucoca ioyile, isihluzi somoya, isihluzo sekhabhathi kunye nefilitha yamafutha
3. I-OEM iyafumaneka:
1) logo Elungiselelweyo okanye ibhokisi umbala
2) Nawuphi na umbono wokucoca imoto, sixelele nje inombolo ye-OEM, sinokukwazi ukuyizalisekisa kwaye siyibeke kwimveliso
4. Umgangatho ophezulu, ixabiso lokukhuphisana.
5. Inkonzo yasemva kokuthengisa:
I-1) Zonke iimveliso ziya kuthi zihlolwe ngokungqongqo kumgangatho mveliso wethu ngaphambi kokupakisha, sinamava eqela leQC elijongene nokuhlolwa komgangatho ngaphambi kokuhambisa.
2) Zonke iimveliso ziya kupakishwa kakuhle ngaphambi kokuhambisa.
6. Ukuhanjiswa okukhawulezayo.
Egqithileyo Icebo lokucoca ulwelo lweoyile yeHONDA ACCORD yeoyile yeefayile ze-OEM 15400-PLC-004 Usebenzisa i-HONDA
Okulandelayo: uxinzelelo oluphezulu lwemoto edibanisa umbhobho werabha wesilicone
Icebo lokucoca ulwelo lweCandelo leoyile
Icebo lokucoca ulwelo lweemoto
Ixabiso lokucoca ioyile
Umboneleli wecebo lokucoca ngeoyile
Icebo lokucoca ulwelo endaweni yeoyile
Isihluzi seoyile iToyota Hilux
Icebo lokucoca ioyile yeToyota
izahlulo ezizimeleyo zokucoca ulwelo fuel 030 115 561AB